ဘယ်လိုလေဟာနယ်သန့်ရှင်းရေးအလုပ်လုပ်ကိုင်သလဲ? - တရုတ်ရှန်ဒေါင်း သာ. ကောင်း၏မော်တော်
နှိမ့်ချလေဟာနယ်သန့်စင်သည်ယနေ့အသုံးပြုသော handiest အိမ်ထောင်စုသန့်ရှင်းရေးကရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောသေးထိရောက်သောဒီဇိုင်းကိုလက်ဖြင့်မျက်နှာပြင်များချွတ်ဖုန်မှုန့်နှင့်အခြားသေးငယ်တဲ့အမှုန်ရှင်းလင်းဖို့ရှိခြင်းကှယျပြောကျသှားနှင့်တစ်ဦးထက်ပိုထိရောက်နှင့်မျှမျှတတလျင်မြန်စွာအလုပ်သို့သန့်ရှင်းရေးအိမျတျောကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်။ စုတ်ယူခြင်းပေမယ့်ဘာမျှအသုံးပြုခြင်း, ထိုလေဟာနယ်ဖုန်ကွာ whisks နှင့်စွန့်ပစ်ခြင်းထိုသို့သိမ်းဆည်းပေးသည်။
လေဟာနယ်သန့်စင်အပျက်အစီးများတက်စို့နိုငျပုံကိုရှင်းပြရန်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ကောက်ရိုးနဲ့တူပါကစဉ်းစားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပတျဝနျးကငျြလေထု၏ထက်နိမ့်သောဖိအား: သင်တစ်ဦးကောက်ရိုးတဆင့်သောက်၏တစ်ငုံအရင်သောက်ယူတဲ့အခါ, နို့စို့၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုကောက်ရိုးအထဲမှာအပျက်သဘောဆောင်သောလေဖိအားဖန်တီးပေးပါတယ်။ ရုံအာကာသယာဉ်ရဲ့ကိုယ်ထည်ထဲမှာဖောက်ဖျက်အာကာသသို့လူတွေကိုယူတာပဲဘယ်မှာအာကာသဇာတ်ကားအတွက်ကဲ့သို့ပင်တစ်ဦးလေဟာနယ်သန့်စင်ကသို့လေကြောင်း၏စီးဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ထားတဲ့အထဲမှာတစ်အနုတ်လက္ခဏာဖိအား, ဖန်တီးပေးပါတယ်။
ဆိုးကျိုးဖိအားကိုဖန်တီးရန်တစ်အိတ်ဒါမှမဟုတ်သေတ္တာကလေးသို့, အခြားဘက်ခြမ်းကထွက်တွန်းအားပေး - အလေဟာနယ်သန့်စင်သောလေထုထဲတွင်နို့စို့နေတဲ့ပန်ကာ spins တစ်ခုလျှပ်စစ်မော်တာကိုအသုံးပြုသည် - နှင့်အထဲတွင်ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားမဆိုအသေးအမှုန်။ သင်သာတစ်ဦးချုပ်ထားအာကာသသို့ဤမျှလောက်လေထုအတင်းနိုင်ပါတယ်ကတည်းကသင်, စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကအလုပ်လုပ်ရပ်တန့်လိမ့်မယ်လို့ထို့နောက်ထင်ပေလိမ့်မည်။ ဒီဖြေရှင်းရန်, လေဟာနယ်ဟာမော်တာပုံမှန်လည်ပတ်ဆက်လက်ခွင့်ပြု, အခြားဘက်ခြမ်းအထဲကလေကြံစည်ထားတဲ့အိပ်ဇောဆိပ်ကမ်းကိုရှိပါတယ်။
အဆိုပါလေ, သို့သော်ရုံဖြတ်သန်းပါဘူးနှင့်အခြားဘက်ခြမ်းအထဲကနှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ရ။ ဒါဟာလေဟာနယ်သုံးပြီးလူတွေကိုရန်အလွန်အန္တရာယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ, တစ်ဦးလေဟာနယ်ကိုယူလိုက်တယ်သောအမှိုက်များနှင့်အညစျအကွေး၏ထိပ်ပေါ်မှာပြုလုပ်ကိုလည်းမျက်စိနီးပါးမမြင်ရတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအလွန်ချောမှုန်စုဆောင်း။ သူတို့အလုံအလောက်အမြောက်အမြားအတွက်ရှိုက်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့အဆုတ်ပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ မပေးသမျှသောဤအမှုန်များ၏အိတ်သို့မဟုတ်သေတ္တာကလေးခြင်းဖြင့်ပိတ်မိနေကြသည်ကတည်းကလေဟာနယ်သန့်စင်အနည်းဆုံးဒဏ်ငွေ filter ကိုကနေတဆင့်လေကြောင်းဖြတ်သန်းနှင့်မကြာခဏ HEPA (High အသုံးမှုန်ဖမ်းဆီးမှုများ) နီးပါးအပေါငျးတို့သညျမွမှေုနျ့၏ဖယ်ရှားပစ်ရန် filter ။ သာယခုလေကြောင်းနောက်တဖန်မှုတ်ခံရဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံသည်။
လေဟာနယ်သန့်စင်၏တန်ခိုးသည်၎င်း၏မော်တာ၏တန်ခိုး, ဒါပေမယ့်လည်းစားသုံးမှု port ရဲ့အရွယ်အစား, ဖုန်တက်ယူတာပဲသောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်မဟုတ်ပဲဆုံးဖြတ်သည်။ တစ်ဦးကျဉ်းကျမ်းပိုဒ်ကတဆင့်လေထု၏တူညီသောငွေပမာဏကိုဖျစ်ညှစ်လေပိုမြန်ရွှေ့ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဖြစ်စားသုံးမှု၏အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့, ပိုစုတ်ယူခြင်းအာဏာကိုထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကျဉ်းမြောင်းသော, အသေးစား entry ကိုဆိပ်ကမ်းများနှင့်အတူလေဟာနယ်သန့်စင် attachment များကိုပိုကြီးတဲ့တစျခုထက်ပိုစုတ်ယူခြင်းရှိသည်ထင်ရသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာလေဟာနယ်သန့်စင်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများဖြစ်ကြပေမယ့်သူတို့အားလုံးဟာတစ်ဦးပန်ကာကို အသုံးပြု. အနုတ်လက္ခဏာဖိအားကိုစို့-up, ဖုန် trapping, အအိပ်ဇောလေထုသန့်ရှင်းရေး, ပြီးတော့သူကဖြန့်ချိ၏တူညီသောနိယာမအပေါ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုသူတို့မရှိဘဲတာ dirtier ရာအရပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။